5 Linux Kugoverwa Kuti Upe Hupenyu Hutsva Kune Yako Yakaderera-Inowana Computer | Kubva kuLinux
Si une komputa yakare iyo iwe yawakaisa parutivi pakona kana kukanganwa chero kupi zvako mumba mako, rega ndikutaurire iwe unogona kuibvisa guruva uye ndokupa iyi imwe hupenyu hutsva.
Zvakanaka, nekuda kwekusiyana kukuru kweLinux kugoverwa kuripo, ndinogona kukuudza izvozvo zvakare kune migove yakanangidzirwa kuitiswa pamakomputa-zviwanikwa emakomputa uye nekushandisa kweimwe yeiyi unogona kupa komputa yako mukana wechipiri.
Ini ndinofanira kutaura kuti uku kungori kusanganisa kwevashoma, saka kana ndikasataura chero kuzivikanwa iwe unogona kugovana nesu mumashoko.
4 Damn Diki Linux
AntiX kugovera zvinonakidza kwazvo, inokwanisa kumhanya kubva kuPII ine 64MB ye RAM. Kubva pane yakakurumbira kugoverwa kweDebian Linux, AntiX inogona kuvimbisa kuita kwakanakisa uye zvakare inopa seti yezvakakosha zvishandiso,
CPU: Intel PII kana yakakwira
RAM: 64 MB kana kupfuura
HDD: 2G kana kupfuura
Kana iwe uchida kurodha pasi kugoverwa kweLinux iwe unogona kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chekurodha unogona kuwana iyo system mufananidzo. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Tiny Core iri imwe yediki diki yekuparadzira kweLinux Iyo inounza akakosha maficha ekutanga ekushanda kweiyo system Tiny Core Linux yakagadzirirwa kumhanya kubva ku RAM, izvo zvinoita kuti kugovera uku yakanakira yakaderera-zviwanikwa zvikwata.
Core Tiny iri inowanikwa ye32-bit uye 64-bit zvivakwa. Iyo yazvino vhezheni yeTiny Core ingori 16MB.
CPU: Intel i486 kana zvirinani
RAM: 16 MB kana kupfuura
HDD: 2GB kana zvimwe (kana yakaiswa)
Puppy linux idiki diki yekuparadzira kweLinux asi zvakakwana kwazvo uye pamusoro pezvose zvine simba kwazvo. Iko kugovera kunovatendera kushandura chero PC kuita muchina mumwe, super nekukurumidza uye kwakachengeteka.
Puppy Linux kugovera kwakagadzirwa naBarry Kauler uye Iyi sarudzo yakanakisa kune yako yepasi-inotambira timu.
Kugoverwa kweLinux inomhanya pane chero muchina uye yatove neseti yeakaisirwa mashandisirwo uye manejimendi sisitimu pamwe neayo system echayo maturusi.
CPU: 333MHz kana zvimwe
HDD: 5GB kana kupfuura
Kune avo vasati vaziva, Damn Small Linux Iko kugoverwa kweLinux, iyo iine chete 50 MB ye RAM ndangariro inogona kuitwa, kugovera uku kunoenderana neDebian Linux kugovera.
Kugoverwa uku inogona kuitwa nyore nyore kubva pendrive pasina kuita kuisirwa uye kunyangwe iko kugovera kwakanaka kwazvo kwehunyanzvi kwakapihwa yakaderera zviwanikwa zvinodiwa.
Damn Diki Linux Icho chakanakisa sarudzo kune iwo zvikwata zvine mashoma zviwanikwa.
RAM: 50 MB kana kupfuura
HDD: 2 GB kana zvimwe kuitira kuisa
Izvi ndizvo kugoverwa kweLinux, kwakagoverwa muLiveCD kana Live Live vhezheni, uye iyo system .iso inongotora chete 35 MB. SliTaz inopa yakakwana graphical desktop nharaunda uye inoshanda kwazvo, zvichibva pa LXDE uye Openbox.
Iyo yazvino vhezheni yakagadzika yeSliTaz yakaburitswa masvondo mashoma apfuura, kuti ive yakakosha muna Chikunguru 2018.
RAM: 24 MB kana kupfuura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » 5 Linux kugovera kufema hupenyu hutsva muPC yako inotambira mari
Ini ndinouya kubva kunzvimbo dziri kure, kutsvaga kutsvaga izvo CrunchBang Linux yaimbove, kunyanya uzivi hwayo, uye ikozvino yave nguva yekuyedza izvi zvinounzwa.
Mhoro weborn webhusaiti
eroottinen maonero erotic series erotic bhuku refu chitsuwa erotic kudanana eotic
Crunchbang ichiri kushanda mushe mushe asi dambudziko randinowana neese akareruka kugoverwa nderekuti iwe unopedzisira wave kurodha raibhurari yezvishandiso zvisina kuitirwa kugoverwa kureruka.
Ini, pane kunetsekana nekuisa mwenje inogoverwa, ini ndinoedza kutsvaga kuti ndeupi wavo ane akanyanya kushandiswa maitiro
cuban ziso akadaro
@AMEM: Ini ndaifarawo neCrunchbang (Wheezy), yepedyo yandakawana, iri muDebian forogo: Devuan, asi kunyanya mune chakatorwa: Hupenyu Hwakanaka Linux, isingasvike 100 mb, iine Openbox pabhoti (zvinotora mashoma masekondi kuti ubate kumusoro, uku kutenda nekuda kwekusave neSystemd seinit). Asi edza chero ipi zvayo yakatorwa kana Devuan pachayo, hauzombozvidemba: https://devuan.org/os/partners/devuan-distros
Ah! Uye sedhata reruvara, pane chinobva chinonzi Crunkbong, zvinoita sekunge unoziva? … Handisati ndambozviedza saka handikwanise kutaura.
Pindura kuna ojosdecubero
Mangwanani akanaka, kunyatsoisa aya madistros kunonakidza, asi kana uchiisa zvinongedzo zvinomuka nekuda kwekukanganisa kwangu (zvinogona kukundwa nekutsvaga) chaizvo kana ndichida kupa kumisikidza kwangu seti yematuru emabasa ekushandira senzvimbo dzekutengesa ... kana Ini ndoda kuisa tiketera printa, barcode kuverenga, iyo yekubata skrini uye nekudaro wedzera kukosha kune yako linux kuisirwa neUbuntu 16.04.5 pane Atom N270 1.6. Mem 1gb yakati nonokei asi parizvino ndiyo iri kundipa dzimwe sarudzo kana uchitsvaga mhinduro dzekuisa zvinongedzo. Ndatenda
Pindura kuna Christiansat
Kana Ubuntu ikakushandira uye iwe uchida chimwe chinhu chakareruka, asi uchichengetwa uye uchienderana, Lubuntu inogona kunge iri sarudzo yakanaka.
Aya ma distros anoitirwa maPC akura (ini ndinokurudzira zvikuru Puppy mune izvi), kwete michina yemazuva ano ine mashoma maficha: edza Xubuntu kana Lubuntu.
Ubuntu 17.10 Artful Aardvark inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, gadziridza izvozvi